Malagasy tamin’ny nanatrehany ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika vehivavy eo amin’ny taranja rugby à XV andiany voalohany ka nahazoany ny laharana faha-3 tamin’ny fifaninanana rehefa nanao ady sahala 15 - 15 tamin’io lalao farany nataony io. Deraiko manokana ny mpilalao Malagasy niaraka tamiko niakatra kianja niatrika ny andrarezina Ougandey tamin’io lalao farany io, hoy i Laurence Rasoanandrasana kapitenin’ny Makis vehivavy tany Afrika Atsimo. Tena nampiseho finiavana sy fahavononana tokoa ny handresy an-dry zareo Ougandey izy ireo ka nanohitra hatramin’ny farany na dia nahery vaika aza ny totoafo nataon’ity farany tao anatin’ny 10 minitra faran’ny lalao. Izahay anefa mbola vao eo am-pandaminana ny fiarahan’ny mpilalao manontolo izay vao sambany daholo niatrika lalao Afrikanina. Azo ambara fa nahazo lesona sy traikefa maro izahay tamin’iny fifaninanana iny na dia nikoropaka sy be aza ny tsy fanarahana toromarika nataon’ny mpilalao tamin’ny ankapobeny.
Ny ekipam-pirenen’i Afrika Atsimo nandresy ny vehivavy Kenianina 39-0 teo amin’ny lalao famaranana no nibata ny Amboaran’i Afrika rugby vehivavy andiany voalohany.